AKON’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA :: Manome toky ny hisian’ny vary mora amidy mandavan-taona Rajoelina • AoRaha
AKON’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA Manome toky ny hisian’ny vary mora amidy mandavan-taona Rajoelina
Ho Filoham-pirenena hitsinjo an’ireo sahirana. Noporofoin’ ny kandidà laharana faha-13, Rajoelina Andry, indray ny fahavononany hitodika amin’ny fiahiana ny sôsialim-bahoaka, nandritra ny fampielezan-kevitra nataony tany amin’ny Faritra Vakinankaratra. Efa voarafitra ao anatin’ny tetikasa maika hitsinjovana ny fahasahiranan’ny mponina ao anatin’ny tetikasa « IEM » izany.
Tao amin’ireo kaominina telo mandrafitra ny distrikan’i Faratsiho dia nanao velirano ny hivarotra vary mora mandavan- taona ny kandidà Rajoelina Andry. Nambarany fa « hamidy amin’ny antsasa-bidy amin’ny vidim-bary ankehitriny io vary io », ho fitsinjovana ny fahasahiranan’ny mponina. «Amin’io herinandro ho avy io dia efa hisy ny vary mora halefako aty aminareo. Vao lany ho Filoha aho dia hotohizana izany », hoy izy.
Ankoatra izay, nampanantena hametraka hôpitaly manara-penitra ao Faratsiho ihany koa ny kandidà laharana faha-13 ary hanome fiara mpitondra marary . “Amboarintsika ny Epp sy Ceg eto aminareo ary hisy ny fanamboarana orinasa mpamokatra zezika hanampiana an’ireo tantsaha. Azo aloa tsikelikely io vidin-jezika io”, araka ny toky nataon’ny Filoha Rajoelina Andry.
Tao Ambohibary Sambaina indray, dia nohamafisin’ny Filohan’ny tetezamita teo aloha ny fahavononany hanangana orinasa fanamboarana fitaovana hahazoana angovo avy amin’ny alalan’ny herin’ny masoandro (panneaux solaire). Mba hahafahana manala ny fahasahiranan’ireo tantsaha amin’ny tsy fisian’ny jiro no antony hanatanterahany an’izany. Momba ny tan-tsoroka ho an’ny fampi-roboroboana ny fambolena , dia nilaza ny hametraka tetikasa hahafahana manome tany 10 hekitara ho an’ireo tanora sy ireo tantsaha Rajoelina Andry.
Avy eo dia nitohy moramora nihazo ny kaominina Tsarahonenana sy Ambano ao amin’ny distrikan’Antsirabe II ny dian’ny kandidà laharana faha-13. Namelona ny fanantenan’ ireo mponina tao an-toerana ny fandrenesana ny fizaràna ny fitaovana mamokatra herinaratra isan-tokantrano sy ny velirano amin’ny fametrahana ny vondron-tafika manokana hiady amin’ny asan-dahalo.
Tao Betafo sy Mandoto kosa no namerimberenan-dRajoelina Andry fa ataony ho laharam-pahamehana ny famerenana an’ireo tanim-bahoaka nobodoina andian’ olona tamin’ny fomba tsy ara-dalàna. “Haverina amintsika vahoaka ireny”, hoy izy. Misedra olana eo amin’ny fisiana bibikely manimba ny voly katsaka ireo tantsaha ao Betafo sy Mandoto. Rehefa nahare an’izany ny kandidà laharana faha-13 dia nilaza ny handefa manam-pahaizana manokana hikaroka sy hanamboatra ny fanafody hoentina handripahana an’ireo bibikely ireo.
Teo am-pamaranana ny lahateniny no nanentanan’ny kandidà Rajoelina Andry ny vahoaka fa mila Filoham-pirenena tanora, tia tanindrazana ary mitsinjo ny mponina madinika i Madagasikara. “Ampio aho ary tsy maintsy mandresy isika”, hoy ny hafatrafatra napetrany nandritra an’ity fampielezan-kevitra tany amin’ny Faritra Vakinankaratra ity.
FAKANA AN-KERINY :: Votsotra i Malik Karmaly, tsy mbola hita ilay Tonizianina